Nnwom Mu Dwom 4 AKCB - Matteus 4 LB
Nnwom Mu Dwom 4:1-16
1Wo ho yɛ fɛ, me dɔfo!
Ao, wo ho yɛ fɛ!
Wʼaniwa a ɛhyehyɛ wo nkataanim mu no te sɛ aborɔnoma.
Wo nwi te sɛ mpapokuw a
wɔresian Gilead Bepɔw.
2Wo se te sɛ nguankuw a wɔatwitwa wɔn ho nwi foforo,
a wofi aguaree.
Baako mpo nyeraa ɛ.
3Wʼanofafa te sɛ koogyan hama;
wʼano yɛ fɛ.
Wʼasontɔre a ɛhyɛ wo nkataanim mu
te sɛ ntunkum aduaba fa.
4Wo kɔn te sɛ Dawid abantenten,
a wɔasi no fɛɛfɛ;
na akokyɛm apem sensɛn ho,
a ne nyinaa yɛ akofo kyɛm.
5Wo nufu te sɛ atwemma abien,
atwemma nta a
wodidi wɔ sukooko mu.
6Enkosi sɛ ade bɛkye,
ama honhom aguan no,
mɛkɔ kurobow bepɔw
ne aduhuam nkoko no so.
7Me dɔfo, wo ho yɛ fɛ papa;
wo ho nni dɛm biara.
8Ma yemfi Lebanon, mʼayeforo,
wo ne me mfi Lebanon nkɔ.
Sian fi Amana atifi bra,
fi Senir atifi, Hermon apampam hɔ,
fi gyata buw mu
ne mmepɔw a asebɔ dɛɛdɛɛ hɔ.
9Woagye me koma abɔ so, me nuabea, mʼayeforo;
woagye me koma abɔ so;
wode wʼani a ɛbɔɔ me so,
ne wo kɔnmuade mu ɔbohemaa baako.
10Wo dɔ yɛ anigye, me nuabea, mʼayeforo!
Hwɛ, wo dɔ sɔ ani sen bobesa,
na wʼaduhuam yɛ huam sen pɛprɛ biara.
11Asɛm dɛdɛ fi wʼano sɛ ɛwokyɛm, mʼayeforo;
nufusu ne ɛwo wɔ wo tɛkrɛma ase.
Wo ntade mu hua te sɛ Lebanon de.
12Wote sɛ turo a wɔato ano pon mu, me nuabea, mʼayeforo;
woyɛ asuti a wɔagye ho ban, asubura a wɔasɔw ano.
13Wo nnua yɛ nnuabafuw so ntunkum
a ɛsow aba pa,
ahuahaa ne nnuannua,
14nnuannua ne mmetire,
osiko ne sinamon,
a ohuamfufu nnua ahorow,
kurobow ne dupapo
ne pɛprɛ papa ahorow nyinaa ka ho.
15Woyɛ asubura turo,
abura a nsu sen fi mu
a ɛsen fi Lebanon.
16Sɔre, atifi fam mframa!
Bra, anafo fam mframa!4.16 Mframa a ɛbɔ fi atifi fam no mu dwo enti ɛma nnuaba yɛ foforo daa. Mframa a ɛbɔ fi anafo fam no mu yɛ hyew na ɛma nnuaba no bere. Ne abien ka bɔ mu a, ɛma mframa a ɛyɛ huam fa turo no mu.
Bɔ fa me turo mu,
sɛnea ɛbɛyɛ a ne hua no begyigye afa baabiara.
Ma me dɔfo mmra ne turo mu
na ɔmmɛka ne nnuaba papa no nhwɛ.
AKCB : Nnwom Mu Dwom 4